Mumps, पनि सुँगुर रूपमा चिनिने यो salivary ग्रन्थीहरूको सुनिंनु विशेषता द्वारा एक तीव्र भाइरल रोग भनिन्छ। मानिसहरूलाई मा विकृति मात्र reinfection फारम बलियो nevospriim रूपमा, एकचोटि विकास गर्न सक्छौं ity। अक्सर सुँगुर बिरामी बच्चाहरु। त्यहाँ वयस्क मा mumps भने, यो कठिन हस्तान्तरण र जटिलताहरुलाई विकास खतरनाक छ।
संक्रमण paramyxovirus संक्रमण अक्सर थोपाहरूद्वारा मार्फत वा संक्रमित विषयहरू मार्फत हुन्छ कारण छ। रोगी आफ्नो लक्षण को उपस्थिति दुई दिन पहिले नै संक्रामक हुन्छ र विकृति को संकेत को उपस्थिति पछि अर्को पाँच दिनको लागि अरूलाई खतरा छ। गर्मी चालू अवधि (भाइरस को इन्जेशन देखि समय लक्षण को उपस्थिति अघि) औसत 12 24 दिन।
वयस्क मा Mumps: लक्षण
मामला एक विशिष्ट छ भने, mumps acutely सुरु हुन्छ। नाटकीय चबाने र निगलने वृद्धि तापमान (अप 40 डिग्री), त्यहाँ कमजोरी, कान, टाउको दुखाइ, aggravated, अत्यधिक लालास्रवण, को दुखाइ छ कान lobe, अम्लीय पदार्थ प्रयोग गरेर aggravated। जब को सुनिंनु parotid ग्रंथि गालामा दुखाइ को स्पर्श मा गाल मा वृद्धि, उत्पन्न हुन सक्छ। स्थानहरू जहाँ inflamed ग्रंथि, उपभेदों र चमकदार भन्दा छाला। सामान्यतया, salivary ग्रंथि मा वृद्धि रोग को शुरुवात पछि तेस्रो दिन यसको अधिकतम पुग्छ। सुनिंनु अप दस दिनको लागि विद्यमान सक्छ। कहिलेकाहीं वयस्क मा mumps भएको कुनै संकेत छ salivary ग्रन्थीहरूको छन् प्रभावित। यस मामला मा, रोग गाह्रो छ पहिचान गर्न।
वयस्क मा Mumps: जटिलताहरू
भाइरस को रगत प्रवेश भएपछि, यो विभिन्न ग्रन्थि अंगहरु भित्र पस्नु गर्न थाल्छ। त्यसैले, जोखिम निम्त्याउँछ जुन अग्न्याशय, भोग्न सक्छन् तीव्र pancreatitis, को जो ovariitu र oophoritis सक्छ orchitis, को ovaries, संग fraught छ जो testicles। एक मानिस mumps orchitis विकास भने, यो priapism, र बाँझोपन हुन सक्छ। भाइरस पनि भाइरल meningoencephalitis कारण, मस्तिष्क मा भित्र पस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भावित जटिलताहरू पनि हानि सुनेपछि बधिरता उल्लेख गर्न सकिन्छ।
वयस्क मा, पहिले नै उल्लेख रूपमा, रोग छोराछोरीको भन्दा बढी गंभीर छ। सामान्यतया, डाक्टर ओछ्यानमा आराम कम्तिमा दस दिन को लागि उत्सव prescribes। को नियुक्ति साथ सँगै रोगाणुरोधी र antiviral एजेन्ट, सम्भव जटिलताहरू रोकन उद्देश्य को गर्नुपर्छ। रोगी ठूलो परिमाणमा, उदाहरणको लागि, Cranberry वा Cranberry रस, चिया, मा न्यानो पेय तरल देखाइएको थियो infusions नितम्ब। तापमान 38 डिग्री माथिको rises भने, यो antipyretics लिन आवश्यक छ। उपचार समयमा, तपाईं, ज्यादा जोगिन पास्ता, बन्दागोभी, सेतो रोटी, बोसो को खपत कम गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक भोजन पछि हुनुपर्छ आफ्नो मुख कुल्ला।
यो हृदय प्रक्रिया को कि अल्ट्रासाउंड महत्त्वपूर्ण छ?
डिम्बाशय ट्यूमर: वर्गीकरण, वर्णन र निदान
कालो जिब्रो। के, किन र कसरी?
फस्फेट मधुमेह: कारण, लक्षण, निदान, उपचार
विशेषताहरु र कारण: मा बच्चाहरु ओठमा Herpes
को buttock दुखाइ
पेट दुख्यो। के गर्ने? के गर्ने?
"कोन्ड्रोनवा": प्रयोगको लागि निर्देशन, औषधिको विवरण, प्रतिक्रिया
दबाइ "Zakofalk": प्रयोग, मूल्य, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
के वस्तुहरू तपाईं कलेज भर्ना गर्न architect लिनु आवश्यक?
चिनी बिना मकै गुच्छे: प्रति 100 ग्राम को गरमी सामाग्री